Ọkụ n'elu tebụl | Mmanụ ọkụ na tebụl tebụl | Art-fire.com
Art Fireplace na-elekwasị anya na Ethanol Electronic Electronic na Vapor Fires.
Ọkụ Bioethanol nwere ọgụgụ isi yana ọkụ vapor 3D naanị.
Anyị na-elekwasị anya na mmanya na-achịkwa, bio-ethanol ventless fireplaces na 3D vapor fireplaces na nnukwu ọgbara ọhụrụ aghụghọ na nka. Ngwaahịa anyị niile agafeela asambodo CE / FCC / IC akwadoro yana ire ere 100% mbupụ Si China .
Anyị nwere ike iji aka anyị hazie ma wụnye ya maka ndị nwe ụlọ, ndị na-emepụta ihe, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ.
Igwe mmiri nwere ọgụgụ isi
Na oku nke Art Water Alụlụ Ọkụ, Nọdụ ala, Kekọrịta Obi andtọ na Successga nke Ọma na Ezinụlọ na Ndị Mmekọ gị mgbe ị na-a redụ mmanya na-acha ọbara ọbara, Na-ekwu okwu, Na-egwu egwu, Na-achị ọchị… Nke ahụ ga-abụ nnukwu!!! 3Ddị ọkụ ọgbụgba mmiri mmiri 3D ejiri ọkụ wee mepụta ime ụlọ nwere ike ịgbanwe ya,Mfe iji Wụnye ma rụọ ọrụ,Noise,Enweghị okpomọkụ,Naanị Maka Ime Mma.
Chepụta Ventless Bio Ethanol burner
Weta mmekọrịta chiri anya nke ụlọ a mara mma n'ụlọ gị ma nwee ọ coụ dị ọcha. Na ire ọkụ nke Art ethanol Fireplaces, Nọdụ ala, Kekọrịta Obi andtọ na Successga nke Ọma na Ezinụlọ na Ndị Mmekọ gị mgbe ị na-a redụ mmanya na-acha ọbara ọbara, Na-ekwu okwu, Na-egwu egwu, Na-achị ọchị… Nke ahụ ga-abụ nnukwu!!! Jighiri Ogo Njikwa: Karịsịa,Ndị na-ahụ maka ndị na-ewu ewu bụ ndị ndụmọdụ ikpeazụ nke ụlọ ọrụ na-ewu ihe. Ha ga-ahụrịrị maka usoro niile site na ịzụta,A na-anwale ụlọ ọkụ ethanol ọfụma niile ma jupụta n'okpuru njikwa njikwa iji jide n'aka na ị na-agba ọsọ nke ọma.! Kacha mma Mgbe Sale Service: Na ihe karịrị 8 Ahụmahụ afọ na ịnye usoro ọkụ ọkụ na-akpaghị aka,Anyị nwere ike ịsị na anyị nwere ndị injinia nwere ikike idozi nsogbu gị. Anyị na-ekwenye 3 afọ akwụkwọ ikike ogologo oge.Once…
Fanye Ventless Ethanol burner
Jiri ire ọkụ nke ọkụ ọkụ ethanol, Nọdụ ala, Kekọrịta Obi andtọ na Successga nke Ọma na Ezinụlọ na Ndị Mmekọ gị mgbe ị na-a redụ mmanya na-acha ọbara ọbara, Na-ekwu okwu, Na-egwu egwu, Na-achị ọchị… Nke ahụ ga-abụ nnukwu!!! Dika onye ndu ndu oku na China,Egwuregwu Art Art na-elekwasị anya na ọkụ ethanol nwere ọgụgụ isi karịa 10 Emechara ngwaọrụ niile kachasị mma na teknụzụ.
Chọrọ ịmatakwu banyere Art Fireplace? Mgbe ahụ denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị.
A-button ime akara ma ọ bụ site na gị smart ekwentị site integrating na gị Smart Home System.
Ọdụdọ Ethanol Ọkụ AF50
Ime ụlọ Ethanol Burner AF150
Obere Ethanol Burner AF40
Onye nwere ọgụgụ isi Ethanol Burner AF66
Weta mmekọrịta chiri anya nke ụlọ a mara mma n'ụlọ gị ma nwee ọ coụ dị ọcha.
Kedu ụdị ebe ọkụ eletrik ị nwere
Banyere Teknụzụ Vapor Mmiri
Ethanol na-ekpo ọkụ n'ime ụlọ
Art-ọkụ ©Nwebisiinka ©2022 Ikike niile echekwabara.